othomathikhi ice ibhokisi amakhukhi yakhelwe amakhukhi ukwenza ma ...
umthamo ezincane umugqa ukukhiqizwa maamoul
ideskithophu othomathikhi kubba encane kibbeh encrusting Mach ...
othomathikhi ice ibhokisi amakhukhi yakhelwe amakhukhi ukwenza umshini
Fob Inani: US $4999 - 9,999 / Piece
Min.Order Ubuningi: 1 set/order
Supply Ikhono: 100 Piece/Pieces per Month
Inkokhelo Imigomo: T/T, L/C,D/A,D/P,
Ikhukhi yakhelwe kungenziwa egcizelele nezinhlobo design. Kubonakala ngezindlela eziningi ukwenza i-cookie, abanye ezitolo ezincane namakhosikazi ukwenza ukudla ngesandla, it has a intengo okumangalisayo kanye nobudala abantu ezahlukene kanje ukudla.
inombolo Model BK-280
umthamo 5000-6000pcs / h
MOQ 1 isethi
umkhiqizo isisindo 5-200g / pc
Isikhathi esiholayo izinsuku Phakathi 7 zokusebenza uma umshini 1 isethi
isisindo machine 400kg
1) Ukuvikelwa Amakhava eziphuthumayo Misa Inkinobho operation ephephile.
2) Isisindo, ubungako kanye uqweqwe-ukugcwaliswa-ratio angase ashintshwe ngokuvumelana sizikhandle njengoba kudingeka.
3) yezinhloso eziningi: ukusebenza ukukhiqiza izinhlobo ezahlukene zokudla ngokushintsha isikhunta nje.
4) umthamo Big
5) izinhlobo eziningi amakhukhi singenakukwazi yakhelwe.
6) egcizelele umshini, silayishe ezinye izinhlelo umshini emshinini.
7) i-English,, sesiShayina Arabic uyazikhethela ..
8) ukuqeqeshwa khulula siyonikwa lapho ukuhlolwa ikhasimende umshini.
Previous: othomathikhi usuku ibha ibha ekwenziweni izithelo umshini
Okulandelayo: Okuzenzakalelayo amakhukhi ezisontekile ukwenza umshini
okuzenzakalelayo Amakhukhi Ukwenza Machine
Chocolate Egcwele Amakhukhi Machine
Amakhukhi Ukugcwalisa Machine
Amakhukhi Ukwenza Machine
Yakhelwe Amakhukhi Machine
Egcwele Amakhukhi Machine
Ice Ibhokisi Amakhukhi Machine
Small Amakhukhi Machine
Small Double Ukugcwalisa Cookie Machine
Small Egcwele Amakhukhi Machine
Small Ukugcwalisa Cookie Encrusting Machine
Wire umsiki Amakhukhi Machine
Okuzenzakalelayo double umbala bhisikidi ukwenza umshini
Okuzenzakalelayo scotch Iqanda okuqinile ukugcwaliswa encrusting m ...
othomathikhi usuku ibha ibha ekwenziweni izithelo umshini
othomathikhi umbala double abaphundlwe amakhukhi bagcwaliswa ...